Ngwongwo ndị dị n'èzí na-elebawanye anya, ihe ụtọ bụ akụkụ kachasị mkpa nke obodo ugbu a
N'ihu mmepe ngwa ngwa nke ahịa ngwá ụlọ dị n'èzí maka ihe karịrị afọ 20, ọtụtụ ndị na-ere ngwá ụlọ adịghị ala azụ itinye onwe ha na njem nke ahịa ngwá ụlọ dị n'èzí. Ụfọdụ bụ ndị na-agbanwe agbanwe na ngwaahịa nke ọ bụla, ebe ndị ọzọ na-enwe obi ike na nchịkọta dum ...
A na-atụ anya na ngwá ụlọ dị n'èzí ga-agbaji ala ọhụrụ. Akuko ohuru nke nyocha ahia nke n’èzí maka 2021-2031 (ya na 2021-2031 dị ka amụma amụma na 2020 dị ka afọ ntọala) na-egosi na ahịa arịa ụlọ dị n'èzí arịgoro karịa $ 17 ijeri site na 2 ...
1 Akwa efere dị ọcha mgbe anyị na-ehicha ma na-echekwa arịa ụlọ dị n'èzí, anyị ga-ebu ụzọ mara ma ákwà efere ọ̀ dị ọcha. Mgbe emechara ma ọ bụ hichapụ uzuzu, jide n'aka na ị ga-atụgharị ya ma ọ bụ jiri akwa efere ọhụrụ. Ejila akụkụ nke mere unyi ugboro ugboro, ọ ga-eme ka unyi na-ete ya na furni...
Ezuru ezumike n'aka ndị mmadụ
site admin na 21-06-15
Site na nkwalite echiche nke imewe gburugburu ebe obibi, anyị amalitela ilekwasị anya n'ọkwa dị elu nke ịhụnanya na inwe, nkwanye ùgwù na nghọta onwe onye. Ma na ezumike ma ọ bụ n'ehihie mgbụsị akwụkwọ dị jụụ, nke kachasị mma bụ itinye tebụl rattan na oche na nche anwụ anwụ na balc ...
Ịtụgharị azụ azụ gị ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ mmiri nke onwe gị nwere ike ịdị ọnụ karịa ka ị chere. Ịchọrọ inwe ike ịnụ ụtọ oge okpomọkụ, zuru ike ma nwee ahụ iru ala dịka o kwere mee-mana ị chọghị ka ọ daa. Ọ dabara nke ọma, ụlọ ahịa dị ka Lowe's, Home Depot, na Walmart nwere ọmarịcha ọmarịcha…
Na Mee 21, Guangzhou kọrọ akụkọ ọhụrụ enwetara nke COVID-19 na mpaghara Liwan. Okwu ikpe mpaghara bilitere ọzọ ụbọchị 276 ka enwetaghị ikpe ọhụrụ mpaghara na mpaghara Guangdong. Dabere na ozi nke nyocha ahụ, onye ọrịa ahụ ebiela na Guangzhou ụbọchị iri na anọ tupu th ...
Oge 6.3 nke RMB
Na Mee 28, ọnụ ahịa nke etiti etiti RMB na-ere ahịa na 6.3858 yuan na dollar 1, gbagoro isi ihe ndabere 172 site na ụbọchị azụmaahịa gara aga, na-akụ afọ atọ dị elu wee banye n'oge yuan 6.3. Ọzọkwa, ọnụego mgbanwe nke RMB dị n'ụsọ mmiri na dollar US na RMB nke dị n'ụsọ osimiri na dollar US anọwo na...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Sunmaster Ngwongwo N'èzí?
Ahụmahụ Sun Master hụrụ na 1996. Ndị mmekọ gụnyere ọtụtụ F&B a ma ama na ụdị ụlọ oriri na ọṅụṅụ, dị ka Guangzhou Shanglian Thai Restaurant na Libya “A-one” Playcafe&Restaurant. Mgbe afọ 25 nke uto, anyị nwere ahụmahụ miri emi, nkà na ụzụ ọkachamara, usoro tozuru okè. Na mgbakwunye ...
Kedu ihe anyị kwesịrị ịṅa ntị mgbe anyị na-ahọrọ ngwá ụlọ dị n'èzí
Dị ka ihe ịchọ mma gị si dị Ọ bụ ezie na a na-eji ngwá ụlọ eme ihe n'èzí, ma ọ dịkwa mkpa ka ọ dakọtara n'ozuzu ụdị ịchọ mma iji mee nhọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye setịpụ ngwá ụlọ dị n'èzí na mbara ihu ma ọ bụ patio, ị kwesịrị ịtụle ụdị nke ịchọ mma gị nwere. Na-eche na ọ belo...
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Project Of Sun Master Furniture Manufacturer
Sun Master abụghị naanị ihe nrụpụta arịa ụlọ OEM n'èzí nwere ahụmịhe karịrị afọ 20 nke ndị na-emepụta arịa ụlọ na ndị na-eweta oche cafe, mana ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepe emepe ihe karịrị ụdị 30 n'oge ọ bụla. Anyị bụ ndị ọkachamara na patio armrest cha ...
Ụzọ dị mma iji nweta nkọwapụta nke ngwá ụlọ dị n'èzí
Sun Master na-eweta ọnụ na-akpachapụ anya obibia nkọwa nke n'èzí ngwá ụlọ Ọ bụ ya mere anyị ji na-agbalị ime ka Sun master ngwá ụlọ mara mma na n'otu oge ahụ na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị, n'ihi ọdịdị ya na ihe eji eme ihe, onye ga-amasị mgbe niile. ...
Ndụ dị mma n'ime oghere na arịa dị n'èzí
Ubi na mbara ihu nwere ike ime ka ndụ zuru oke maka oghere dị n'èzí. anyị na-enwekarị atụmatụ na: M ga-akụ ụdị mkpụrụ dị iche iche ma ọ bụrụ na m nwere ubi, na-edebe mmiri n'ebe ahụ na anwụ na okooko osisi. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na m nwere ámá ole na ole nke mbara ụlọ, ọ ga-amasị m...
Arụ ụlọ dị n'èzí na-arịwanye elu ...